Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW 2 Phatha iGolide yeGumbi lokuhlambela esasazeke ngokubanzi nge-Pop-up Drain
Izibonelelo zompu wegolide osasazeke ngokubanzi ngamafutshane:
I-Faucet yeBasin yangoku kunye neLula: Ukugqitywa kwebrashi kunye negolide kunokwenza igumbi lokuhlambela lakho lihle kwaye lihle kwaye likuncede umelane nokubola kunye nomhlwa kubomi bakho bemihla ngemihla.
I-3-Hole Mount ene-6-14 intshi yoyilo oluSasazekayoUmgama wofakelo unokuhlengahlengiswa kwiimfuno zesitya. Ukutywinwa okuphezulu kwekhatriji yodongwe kunye nokonga amanzi.
Kulula ukuyisebenzisa: Izibambo ezibini, iidigri ezingama-360 zijikelezisa uyilo oluphezulu lwesipout, ulawulo olululo noluchanekileyo lomthamo kunye nobushushu bamanzi. Ukutywinwa okuphezulu kwe-inki ye-inki kunye ne-anti-drip performance.Ukugcina amanzi i-NEOPERL aerator ixhotyisiwe.
lulaukuba FakaIsakhiwo sokuqala esidibanisa ngokukhawuleza kulula ukusifaka, kwaye unokuzifaka kwisitya sokuhlambela ngokwakho ngaphandle kwemibhobho yamanzi. Gcina umrhumo wokufakwa kwemibhobho yamanzi! Iphakheji iza ne-pop up drain kunye ne-cUPC yokuhambisa amanzi.
WOWOW Iglasi yegumbi lokuhlambela yegumbi lokuhlambela
UKUSEBENZISWA KWENKQUBO YOKUPHAKATHI NOKUHLAWULA UMSEBENZI
Ingena ku-6 - 16 intshi isitya sokuhlambela.
Yenziwe ngebrass yeprimiyamu kwaye ibonakalisiwe kuyilo lwangoku.
Uyilo lwezibambo ezibini kulula ukulawula umthamo wamanzi kunye nobushushu
Izibambo ezithe nkqo kuyilo lwe-ergonomics, ubungakanani obufanelekileyo obulungele ulawulo, bekhululekile ukujika.
Isitshixo esisezantsi sokuhombisa umphezulu wegolide uyilo olukhethekileyo lwespout. Kukhetho olufanelekileyo ukwenza uhlaziyo lwakho lokuhlambela.
Ilingana indlu yerenti, ikhondomu entsha, iflethi enye, ikhaya leemoto, itreyila yohambo, isinki yeRV, kunye nokusetyenziswa kosapho.
ICassridge eKhethekileyo yeBrass
Ulwakhiwo lweBrass oluqinileyo
Ii-intshi ezi-8 zisasazekile
3 Intaba yeHole Deck
Ukusebenza okuphezulu kwe-Neoperl aerator kunokunika ukuhamba kakuhle, kungagcina ngaphezulu kwama-50% amanzi.
Iza kunye neTucai yokuhambisa amanzi
Amanzi ahambisa amanzi eTucai anezigidi zeedola zeinshurensi.
Ayikhokelwanga (ngaphandle komxholo ongaphantsi kwe-0.25%), i-cUPC yi-IMPAO, i-NSF 61 (Iziphumo zeMpilo yaManzi aSelwayo).
1 x Ispec arc ephezulu; 2 x Ukuphatha
1 x Y imilo yethumbu lokudibanisa ngokukhawuleza
2 x 50 cm cUPC Imibhobho yamanzi;
I-1 x I-pop up yokumisa amanzi
SKU: 2320300G iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: Izibambo ezi-2, isitya sombhobho sokuhlambela, Yonk 'indawo
11.69 x 10.04 x 3.11 intshi
Le itephu enkulu! Ndinqwenela ukuba ngendibenzele ezimbini ngakumbi inkosi yam yangasese kodwa andifuni ukuba zifanane zonke.
Itheyipu enkulu iyonke nangona ijongeka intle kwaye ivakalelwa njengomgangatho olungileyo.
Qiniseka ukuba uqinisa isikrufu esisetiweyo nangona i-plumber yenze enye yazo kwaye izibambo bezikhululekile kwaye zidikibala. Utywini olulandelayo lubonise indlela yokuziqinisa xa zibuya ukugqiba umsebenzi owahlukileyo.
Impompo egqwesileyo nangona. Ndicebisa kakhulu.